Isaziso somthetho | Oxford isiZulu Living Dictionaries
Ikhaya Explore Isaziso somthetho
Lesi saziso somthetho sibhekise ngqo kule-website yakwa-oxforddictionaries.com ("Website") kanye nezingxenye zayo futhi esibusa ukusebenzisa kwakho le-website nezingxenye zayo. Ngokusebenzisa i-Website, uyavumelana nezindlela ezisetshenziswayo ezibalulwe kulesi sitatimende.
Ungakwazi ukungena kwezinye izingxenye ezithile ze-Website ngaphandle kokuthi ubhalise noma uhlinzeke i-Oxford University Press ("i-OUP", "thina", "thina" or "lokho okungokwethu") ngemininingwane yakho.
Njengoba kungenzeka ukuthi ulwazi olukwi-Website aluphelele, seluludala noma aluqondile futhi lungaba nezinto zobuchwepheshe okungezona noma amaphutha okubhaliwe, i-OUP igodle ilungelo lokulungisa ulwazi lwe-Website ngokubona kwethu kuphela. Ngalokho, ulwazi olunjalo lungaguqulwa noma lulungiswe ngaphandle kwesaziso.
Sigodle ilungelo lokwenza izinguquko kulesi sazizo somthetho. Noma yiziphi izinguquko esingazenza kulesi saziso somthetho ziyofakwa kuleli khasi bese kuthi, lapho kufanele khona, siyokwazisa nge-email. Izigatshana ezithile zalesi sazizo somthetho indawo yazo ingathathwa izaziso zomthetho noma imigomo ecacile nebekiwe esemakhasini athile e-Website.
Amagama omsebenzisi namagama ayimfihlo
Lapho ubhalise khona kwi-Website wase unikezwa igama lomsebenzisi negama eliyimfihlo, uyavuma ukuthi ngeke unikeze muntu igama lakho lomsebenzisi kanye/noma igama eliyimfihlo. Uma kwenzekile kwadaluleka igama lakho lomsebenzisi kanye/noma igama eliyimfihlo, uyavuma ukuthi uyosazisa ngokushesha ngokudaluleka okunjalo ukuze i-OUP ithathe izinyathelo ezifanele zokuvikeleka bese ikuhlinzeka ngegama lomsebenzisi negama eliyimfihlo okusha.
Ukusebenzisa umbhalo we-Website
Ukubheka, ukubuka, ukuthola, kanye nokukhombisa izingxenye
ukugcina kwikhompyutha izingxenye zombhalo we-Website;
kanye/noma ukuphrinta amakhophi ngayinye ezingxenye zombhalo we-Website
Esimweni ngasinye, kuye ngokuvumeleka okuthile okuvela emakhasini athile e- Website. Ungeke wakwazi ukususa noma uguqule izaziso zamalungelo okushicilela noma ezinye izindlela zokuzikhombisa noma isitatimende sokungazibophezeli kokuthile njengoba zivela kwi-Website; ngohlelo oluthile wenze amakhophi aphrintiwe noma ekhompyutha alokho okucashunwe emibhalweni okuningi kwaleyo mibhalo enemikhawulo ukwenzela noma yini ngaphandle uma kuvunyelwe umthetho noma njengoba kugunyazwe i-OUP; ukhombise noma unikezele noma ngayiphi ingxenye yombhalo kunoma yiluphi uhlelo lwekhompyutha lokusabalilsa ulwazi oluthile, kubandakanya ngaphandle komkhawulo i-internet ne-World Wide Web; ukuvumela noma ubani ukuthi afinyelele noma asebenzise umbhalo; kanye/noma usebenzise umbhalo wonke noma ingxenye yawo ukwenzela ukuhweba.
Uma ubhalisela ukuthola izincwadi zezindaba noma wemukela njalo imininingwane yethu nge-web ungasebenzisa kuphela umbhalo owuthunyelelwe ukungenzeli ukuhweba. Ngeke ukwazi:
ukususa noma ukuguqula izaziso zamalungelo okushicilela noma ezinye izindlela zokuzikhombisa noma isitatimende sokungazibophezeli kokuthile njengoba zivela embhalweni othunyelelwe wona;
ngohlelo oluthile wenze amakhophi aphrintiwe noma ekhompyutha alokho okucashunwe emibhalweni okuningi kwaleyo mibhalo enemikhawulo ukwenzela noma yini ngaphandle uma kuvunyelwe umthetho noma njengoba kugunyazwe i-OUP;
ukukhombisa noma unikezele noma ngayiphi ingxenye yombhalo kunoma yiluphi uhlelo lwekhompyutha lokusabalilsa ulwazi oluthile, kubandakanya ngaphandle komkhawulo i-internet ne-World Wide Web;
ukuvumela noma ubani ukuthi afinyelele noma asebenzise umbhalo; kanye/noma
ukusebenzisa umbhalo wonke noma ingxenye yawo ukwenzela ukuhweba.
Amalungelo omsebenzi wokuqamba
Thina kanye/noma labo abasinika imvume bangabanikazi awo onke amalungelo omsebenzi wokuqamba kwi-Website, futhi i-Website kanye nemibhalo ekwi- Website ivikelwe yimithetho yomsebenzi wokuqamba emhlabeni jikelele kubandakanya nemithetho yelungelo lokushicilela neyophawu olumele inhlangano. Kuye ngemigomo yalesi sazizo somthetho kanye nanoma yiziphi ezinye izivumelwano zemvume eziphakathi kwakho ne-OUP, onke amalungelo anjalo agodliwe kanti akukho mibhalo engakopishwa, ilungiswe, ishicilelwe, isakazwe noma inikezelwe ngaphandle kwemvume ebhaliwe kuqala. I-Oxford University Press, i-OUP, i-Oxford kanye/noma noma yimaphi amanye amagama emikhiqizo noma imisebenzi ehlinzekwa i-Oxford University Press futhi okubhekiswe kuyo kwi-Website lokushicilela izimpawu ezibhaliswe ngokusemthethweni ezimele inhlangano noma izimpawu ezibhaliswe ngokusemthethweni ezimele inhlangano zakwa-Oxford University Press.
Ngale kwalokhu osekushiwo ngaphambilini nalapho kusebenza khona, ilungelo lokushicilela emfanekisweni ngamunye ovela kwi-Website elom/elabanikazi wama/bamalungelo o/abashiwo ekhasini eliseceleni lekhompyutha ‘leMininingwane Yesithombe’ lalowo mfanekiso. Onke amalungelo agodliwe. Akukho mifanekiso kwi-Website engakopishwa, ilungiswe, ishicilelwe noma isakazwe okanye inikezelwe.
Izixhumanisi ezikusa kwamanye ama-website zihlinzekwe i-OUP ngobuhle nolwazi kuphela. I-OUP ayivumi ukuzibophezela ngemibhalo equkethwe kunoma iyiphi i-website exhumene ne-Website.
Ngaphezu kwalokho isixhumanisi okungesona ese-website yase-OUP asisho ukuthi i-OUP iyavumelana noma yemukela noma yikuphi ukubhalwa kombhalo, noma ukusetshenziswa, kwe-website enjalo noma imikhiqizo kanye/noma nemisebenzi ehlinzekwe kwi-website enjalo. Kukuwe ukuthi uqaphele uqinisekise ukuthi noma ngabe yini oyikhethayo ukuthi uyisebenzise ayinazo izinto ezinjalo noma izinhlelo ezenza umonakalo kwikhompyutha zedlulele kwenye ngokwenza komuntu (viruses), izinhlelo ezenza umonakalo kwikhompyutha ezizedlulisa ngokwazo ukuya kwenye ikhompyutha (worms), izinhlelo ezenza umonakalo kwikhompyutha ezibukeka zingeyiyo ingozi kodwa zidale umonakalo uma sezifakwe kwikhompyutha (Trojans) nezinye izinto ezinjalo ezidala umonakalo.
Nakuba senza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi uyakwazi ukungena kwi-Website amahora angama-24 ngosuku, asinakwethweswa cala uma ngabe noma ngasiphi isizathu akungeneki kwi-Website noma ngasiphi isikhathi noma ngasiphi isikhathi esithile.
Ukungena kwi-Website kungamiswa okwesikhashana futhi ngaphandle kwesaziso uma kwenzeka uhlelo lwekhompyutha lwehluleka ukusebenza, kwenziwa isiqiniseko sokuthi luyasebenza noma lulungiswa noma ngezizathu ezingaphezu kwethu.
Izikhalazo zezenzo zokuphambana namalungelo okushicilela
I-OUP ihlonipha, futhi ithatha ukuvikeleka kwamalungelo komsebenzi wokuqamba njengalokho okubaluleke kakhulu. Uma ukholwa ukuthi noma yimuphi umbhalo kule-website uphambana namalungelo akho okushicilela futhi unesifiso sokuthi ukhishwe, sicela ukuthi usithumelele isazizo esibhaliwe nge-email noma ngeposi okubandakanya:
(i) isiginesha yesandla noma eyenziwe ngekhompyutha yomnikazi onelungelo lokushicilela noma-ke lowo ogunyazwe ukwenzela umnikazi onelungelo lokushicilela.
(ii) Ukusho umsebenzi onelungelo lokushicilela okuthiwa wenziwe ngokuphambana nomthetho, noma, uma imisebenzi eminingi enelungelo lokushicilela kwi-website eyodwa engaphansi kwesazizo esisodwa, uhla lwemisebenzi enjalo kuyeyo-website.
(iii) Ukusho umbhalo okuthiwa uphambana nomthetho (noma owenziwe ngokuphambana nomthetho) owenele ukuthi uvumele i-OUP ikhombe futhi ithole umbhalo.
(iv) Ikheli lakho, inombolo yocingo, futhi, uma likhona, ikheli le-email ongathintwa kulo.
(v) Isitatimende onenkolelo yokuthi ukusetshenziswa kombhalo ngendlela okukhalazwa ngayo awugunyaziwe umnikazi onelungelo, ummeleli wakho noma umthetho.
(vi) Isistatimende sokuthi ulwazi esazisweni luyilo ngempela, futhi ngaphansi kwenhlawulo yecala lokuqamba amanga lokuthi unegunya lokwenza umnikazi onelungelo lakhe kuphela okusolakala ukuthi kuphanjanwe nomthetho walo.
Uyacelwa ukuthi uthumele lesi saziso kummeleli wethu i-DMCA:
Ngeposi: Legal Department
Umbhalo oqhamuke nomsebenzisi
Izingxenye ze-Website zingavumela abasebenzisi ukuthi bafake umbhalo wabo. Umbhalo ofakwe abasebenzisi awukhombisi izimvo ze-OUP. Ngokufaka umbhalo kwi-Website yethu, uyavuma ukuzibophezela ngeMihlahlandlela yethu. Uyaqinisekisa ukuthi noma yimuphi umbhalo onjalo uhambisana naleyo Mihlahlandlela nokuthi unawo onke amalungelo kuleyo mibhalo enjalo nokuthi imibhalo enjalo ngeke iphambane namalungelo aphathelene nomuntu noma obunikazi anoma yiziphi izinhlangothi zesithathu, ukuthi umbhalo onjalo awunabungozi obuphathelene nobuchwepheshe (kubandakanya, ngaphandle komkhawulo, izinhlelo ezenza umonakalo kwikhompyutha zedlulele kwenye ngokwenza komuntu (viruses), izinhlelo ezifakwa kwikhompyutha ngabomu kwenzelwe ukuthi zenze umonakalo (logic bombs), izinhlelo ezenza umonakalo kwikhompyutha ezibukeka zingeyiyo ingozi kodwa zidale umonakalo uma sezifakwe kwikhompyutha (Trojan horses), izinhlelo ezenza umonakalo kwikhompyutha ezizedlulisa ngokwazo ukuya kwenye ikhompyutha (worms), izingxenye ezinobungozi, imininingwane enamaphutha noma izinhlelo zekhompyutha eziyingozi noma imininingwane eyingozi).
I-OUP igodle ilungelo, ngokubona kwayo kuphela, ukubuyekeza, ukulungisa amaphutha noma isuse noma yimuphi umbhalo othunyelwe abasebenzisi i-OUP ebona ungahambelani neMihlahlandlela (isixhumanisi) kanye/noma icekela phansi isithunzi, ungekho emthethweni, usongela, onokungcola noma ongathandeki. Ngale kwalokhu osekushiwo ngaphambilini, i-OUP ayivumi impela ukwemukela noma yikuphi ukubhalwa kombhalo noma ibekwe icala ngalowo mbhalo ofakwe nguwe noma yimuphi omunye umsebenzisi we-Website. Sinawo futhi namalungelo okukudalula kwiziphathindla zomthetho noma kunoma yiluphi uhlangothi lwesithathu abathi noma yimuphi umbhalo othunyelwe noma ofakwe nguwe kwi-Website yethu uphambana namalungelo omsebenzi wabo wokuqamba, noma ilungelo labo lengasese.
Ilungelo le-OUP lokusebenzisa umbhalo oqhamuke nomsebenzisi
Noma yimuphi umbhalo owufake kwi-Website yethu uyothathwa njengalowo ongenabumfihlo. Ekubhekeni i-OUP ukuthi ikuvumele usebenzise le-Website ngokuhambisana nalesi Saziso Somthetho (bheka Ukusetshenziswa kombhalo we- Website ngaphezulu), uvumela i-OUP ukuthi ibe imvume engapheli, yomhlaba jikele, engenakuhlehliswa, engakhokheli igalelo olenzile, eyedluliseka komunye umuntu, engenamgomo wokuthi isetshenziswa ubani yokuthi isebenzise, ilungise amaphutha, ihlaziye, ishicilele, ikhombise, yedlulisele emphakathini futhi isebenzise umbhalo onjalo (noma iyiphi ungxenye yawo) kuzo zonke izilimi noma ngayiphi indlela noma indlela yokuwedlulisa noma ngabe ukhona kumanje noma cha (kanye nokunikeza imvume ohlangothini lwesithathu onke lawo malungelo anjalo). Unikezela nganoma yimaphi amalungelo enkambiso yokulungileyo kunoma yimuphi umbhalo owufaka kwi-Website yethu (kubandakanya kodwa kungagcini elungelweni lokwaziwa njengombhali). Singasho ukuthi nguwe obhalile kodwa asiphoqelekile ukwenze njalo.
Ukuqinisekisa izinga lokubhaliwe
Sigodle ilungelo lokulandela yonke imibhalo ethunyelwe kwi-Website sibheka noma yini ephambana nalesi saziso Somthetho kanye/noma Imihlahlandlela; ngaleso sizathu, eminye yemibhalo ethunyelwe ingathunyelwa ukuthi iyobhekwa izinga ngaphambi kokuthi ishicicelwe futhi, ngalokho, kungathatha isikhathi ukuthi umbhalo owuthumele uvele kwi-Website.
Siyohlonza, ngokubona kwethu, ukuthi ngabe kube nokuphambana nalesi sazizo somthetho noma Imihlahlandlela [isixhumanisi] ngokusebenzisa kwakho i- Website. Uma kuba nokuphambana nalesi sazizo somthetho noma Imihlahlandlela, singathatha isinyathelo esinjalo uma sibona kufanele kubandakanya kodwa kungagcini ukuvimba ngaphandle kwesexwayiso noma ukuxoxisana nomsebenzisi ongahambisani nalesi sazizo somthetho noma Imihlahlandlela, futhi sisuse yonke imibhalo namagama nezihumusho okuthunyelwe.
Ukwehluleka ukuhambisana nalesi sazizo kanye/noma Imihlahlandlela kungaholela ekutheni kuhoxiswe okwesikhashana noma unomphela ukungena kwakho kanye/noma ilungelo lakho lokusebenzisa i-Website.
Ubunjalo bomhlaba jikele bama-Websites
Uyabubona ubunjalo bomhlaba jikelel be-Website futhi ngalokho, uyavuma ukuhambisana nayo yonke imithetho yasekhaya endaweni yangakini uma usebenzisa i- Website.
Ulwazi olushicilelwa kwi-Website lungaba nomongo wolwazi noma umongo wolwazi weminye imibhalo emisebenzini kanye/noma emikhiqizweni esiyihlinzekayo engamenyezeliwe noma engatholakali ezweni lakho. Immongo yolwazi enjalo ayisho ukuthi sihlose ukumemezela imisebenzi kanye/noma imikhiqizo enjalo ezweni lakho.
Lesi saziso somthetho sibhalwe ngesiNgisi. Uma lesi sazizo sihunyushelwe kunoma yiluphi olunye ulimi, ulimi lwesiNgisi yilona oluchumayo.
Uyavuma ukuthi lesi sazizo somthetho siyobuswa kuphela ngokwemithetho nezinkantolo zaseNgilandi nase-Wales. Ngale kalokhu osekushiwo ngaphambilini, akukho kulesi sazizo somthetho okuyovimba i-OUP ekufakeni isicelo kunoma iyiphi inkantolo ukuthi kulalelwe udaba lokuphambana namalungelo omsebenzi wokuqamba wayo.
Okufanele kuqashelwe ngesimo sobunikazi
I-Oxforddictionaries.com kanye nezingxenye zayo ingafaka amagama athile anesimo noma okuthiwa anesimo sobunikazi njengezimpawu ezimele inhlangano noma okunye. Ukufakwa kwawo akusho ukuthi asethole ukwenzela umthetho ukungabi nabunikazi noma ukubaluleka okwejwayelekile noma yikuphi okunye ukwahlulela okuqondene nesimo sawo somthetho. Esimweni lapho abasebenzi abahlela umbhalo benobufakazi obuthile bokuthi igama linesimo sobunikazi lokhu kukhonjiswe kulelo gama kodwa akukho sahlulelo esiqondene nesimo somthetho samagama anjalo esenziwe noma esiqondiwe ngalokho.
Imibono nolunye ulwazi oluqukethwe kumawebhu okuxoxiswana kuwo eZichazamazwi zakwa-Oxford nokuphawula akukhombisi imibono noma lokho okumelwe yi-Oxford University Press.